पुरानो अचार खाँदा क्यान्सरको जोखिम
Tuesday, 13 Apr, 2021 1:05 PM
काठमाडौं । खाना रुचेन वा स्वाद बढाउन भन्दै अधिकाशं मानिस खानासंग अचार खान्छन् । तत्काल भान्सामा बनाइएको अचार स्वास्थ्यकालागी हानिकारक हुदैन तर बोतल वा प्लाष्टिकमा बन्द प्याक अचारले स्वास्थ्यमा बिभिन्न रोगको खतरा बढाउने गर्दछ ।
के के हुन् त खतरा ?
अचारमा सोडियमको मात्रा धेरै हुने भएकाले अचार खाँदा शरिरमा पनि यसको मात्रा बढ्ने गर्दछ । यसले पेटको क्यान्सर हुने खतरा बढाउँछ ।
धेरै अचार खाँदा रक्तसंचार बिग्रने गर्दछ । यस्तोमा स्ट्रोक तथा हृदयघातको खतरा बढ्ने गर्दछ ।
३. तौल बढाउँछ
अचारमा हुने सोडियमले शरिरमा आइरनको मात्रालाई कम गरिदिन्छ र शरिरमा बोसो बढ्ने गर्दछ । फलत मानिसमा मोटोपन बढ्दै जान्छ ।
धेरै अचार खादाँ सोडियमका कारणले उच्च रक्तचापको जोखिम पनि बढ्ने गर्दछ ।
अचारमा पाइने सोडियमले क्याल्सियमलाई गलाएर मृगौलासम्म पुर्याउँछ । जसले पत्थरीको समस्या निम्त्याउँछ ।
गुलियो अचारमा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ । यसले खानामा मधुमेह रोगको सम्भावना हुन्छ ।
​प्रधानन्यायाधीशले आफूमात्रै रहने पेसीसमेत तोके, बस्ला त बेञ्च ?